Faylasha laga heli karo khadka tooska ah ee OneDrive > Vielhuber David
Faylasha laga heli karo khadka tooska ah ee OneDrive10
Haddii OneDrive, Dropbox, Google Drive, OwnCloud, Box.net: Iyadoo aan loo eegin sanduuqa aad ku kaydinayso faylashaada - adeegyadu waa isku mid. Macaamiisha loo heli karo dhammaan kombiyuutarrada iyo nidaamyada moobiilka, faylalka aan caadiga ahayn ee la qariyey iyo ikhtiyaarrada wadaagga ayaa si uun u kala duwan. Laakiin OneDrive, oo lagu soo daray nidaamka illaa Windows 8.1, wuxuu leeyahay muuqaal gaar ah: kaliya faylasha laga heli karo internetka.
Tani waxay suurtagal ka dhigeysaa in la helo dhammaan macluumaadka iyada oo aan feylashadu qaadanaynin meel lagu keydiyo jirka. Kaliya macluumaadka meta-ka ah sida waqtiyada MAC-ka ayaa lagu kaydiyaa khadka tooska ah, sidaa darteed faylasha waxay dareemayaan sidii haddii laga heli karo gudaha. Haddii aad ka furto faylka Explorer oo kaliya laga heli karo khadka tooska ah, waxaa si otomaatig ah looga soo dejinayaa asalka waxaana si joogto ah looga heli karaa khadka tooska ah.
Kaliya khaanadda "Helitaanka" ayaa muujineysa halka feylasha ay dhab ahaan yaalliin
Faylasha laga heli karo internetka sidoo kale waxaa laga heli karaa raadinta Windows. Liiska dejimaha waxaa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo dhammaan faylasha adduunka oo dhan laga heli karo khadka tooska ah ama khadka tooska ah - adigoo gujinaya midig-gubaha 'Explorer' sidoo kale waad xakamayn kartaa feylasha shaqsiyadeed iyo faylalka qaab qaab yar. Muuqaalka cusub, Microsoft waxay abuurtay waxqabad aad u saraysa oo guul leh oo hadheeyay fikradaha kale sida iswaafajinta xulashada ee Dropbox.